FIIRSO:-Caddeyn: Wasiir Khadiija oo ka been sheegtay xuska maalinta calanka Somalia – War La Helaa Talo La Helaa
FIIRSO:-Caddeyn: Wasiir Khadiija oo ka been sheegtay xuska maalinta calanka Somalia
By shaaca	 Last updated Oct 13, 2018
Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye oo shalay khudbad ka jeedineysay munaasabadda lagu xusayey maalinta calanka Soomaaliyeed ayaa sheegtay in ay tahay markii ugu horeysay ee la xuso burburkii kadib.
Khadiijo Maxamed Diiriye hadalladeeda waxaa ka mid ahaa “Qof kasta oo Soomaali ah waa ogyahay maamuuska maalinta calanka Soomaaliyeed, laakin laga soo bilaabyo 2,000, intii hadda qaran burburka nagu dhacay, dowladihii KMG ahaa markii laga soo baxay, waxaan ku faraxsanahay dowladda Maxamed Cabdullahi Farmaajo, xukuumadda ra’isul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo wasaaradda dhalinyarada iyo Sportiga inay nasiib u heleen inay xusaan maalintan oo aan horay loo xusi jirin”.
Hadalka wasiir khadiijo waa been abuur iyo indho sarcaad ay ku sameysay dadka Soomaaliyeed, maalinta calanka waxaa si joogta ah looga xusi jiray Muqdisho iyo meelo kale oo dalka ah.
Tusaale waxaan u soo qaadan karnaa 2014-kii iyo munaasabadda lagu xusayey sanad guuradaha 60-aad ee maalinta calanka.
MAHAAN KA FIIRSO MUUQALKA
FIIRSO BEENTA KHADIIJO
Maamulka hadda jira ee dhashay Febraayo 8, 2017-kii, waxaa uu ku caan baxay erayo ay ka mid yihiin ‘Markii ugu horeysay” iyo “28 sano kadib”, inta badan kuma fadhiyaan xaqiiq ee waa erayo lagu raadinayo sacab.
OGEYSIIS: Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Bristol ku Nool iyo soo Dhaweynta Madaxweynihii hore Xasan Shiikh
DEG DEG:- Qaraxyo khasaare geystay oo ka dhacay Baydhabo